ဥရောပခရီးစဉ်: တိုးရစ်သင်တန်းနှင့်မလေယာဉ်များကိုယူအဘယ်ကြောင့် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပခရီးစဉ်: တိုးရစ်သင်တန်းနှင့်မလေယာဉ်များကိုယူအဘယ်ကြောင့်
ထက်သင့်ရဲ့နွေရာသီသုံးဖြုန်းဖို့ဘာပိုကောင်းလမ်း ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွား, မှန်သော? မှန်သော. သင်ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဥရောပမြို့တော်အချို့ကိုကြည့်ရှုရန်ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့မလိုပါ; ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဥရောပခရီးသွားများ၏အရေးပါရှုထောင့်တစ်ဦးကသင်၏ခရီးစဉ်များအတွက်ရထားအစားလေယာဉ်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီမှာပါ5ရထားအစားလေယာဉ်များအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုသင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ဥရောပတွေ့ကြုံခံစားကူညီပေးပါမည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ.
ကြောင်းစဉ်းစားအရူးလုပ်ခံရမနေပါနဲ့ လန်ဒန်အခြေစိုက်ပဲရစ် Eurostar နှင့်ပြင်သစ် TGV ရထားဥရောပမှာတစ်ခုတည်းသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းများမှာ - အတိတ်ကာလဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်များအတွက်, ဒီလူတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲကြပြီ တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးမြန်နှုန်းမြင့်လမ်းကြောင်းများ, ရထားလမ်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့၏စီးပွါးရန်ပံ့ပိုးခြင်းနှင့်အစားလေယာဉ်၏သေချာရထားအောင်မူလတန်းနယျလှညျ့ option ကိုအဖြစ်ကောက်ယူရ. ပျှမ်းမျှတွင်, ဥရောပခရီးသွားလာမှုအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား 125 သို့ 200 တစ်နာရီမိုင်, လမ်းကြောင်းများနှင့်ရထားဘူတာပေါ် မူတည်. အလွ interlinked နေကြတယ်.
အဆိုပါမြန် Option ကိုအဖြစ်မယ့်အစားလေယာဉ်၏ရထား
သူတို့ကတောင်ပျံထက်ပိုမြန်စေနိုင်တယ်, အထူးသဖြင့်အကြောင်းကိုထက်ပိုရှည်ခရီးစဉ်များအတွက် 600 မိုင်. ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? သငျသညျကာလ၌တွက်ချက်တဲ့အခါမှာသင်ဖြုန်း မောင်းနှင်မှု လေဆိပ်သို့, ထို့နောက်အစောပိုင်းရှိလာပြီ (မကြာခဏကျော်ဖြုန်း2သင်တို့ပြေးမတိုင်မီနာရီ), နှင့်ကြီးထွားလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများ, သင်ကမြို့လယ်ရထားဘူတာနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့မှမောင်းထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်နားလည်သဘောပေါက်5ရထားဘူတာအရွက်မတိုင်မီမိနစ်.
သင်တစ်ဦးပထမဦးစွာ-Class ကိုလေယာဉ်လက်မှတ်သန်းတစ်ထိပ်တန်း-Notch အိပ်ပျော်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နည်း Pay
သငျသညျအမြားဆုံးဇိမ်ခံရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားလာနေသောအချိန်မှာတောင်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောရလိမ့်မယ် တရားမျှတသောစျေးနှုန်း. သငျသညျရှေ့တျော၌မီးရထားခရီးသွားလာရှောင်ရှားခဲ့ချင်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်တွေးမိပါလိမ့်မယ်! ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျဂျပန်ရဲ့ကြယ်ခုနှစ်လုံးနှင့်အတူတစ်ဦးနှစ်ဦးကိုတစ်နေ့ / တစ်ညခရီးစဉ်များအတွက်လူတစ်ဦးနှုန်းဝန်းကျင်£ 880 ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပျော်မွေ့ ကို Kyushu တောင်ပိုင်းဂျပန်ကျွန်း၏စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ရှုခင်း သငျသညျခရီးအဖြစ်; ကြောင်းစျေးနှုန်းဆန့်ကျင်, ကနေလေယာဉ်လက်မှတ် လန်ဒန် တိုကျိုမှဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်သင်တို့နီးပါး£ 5000 ကုန်ကျမည်. Woah! အကြှနျုပျတို့သညျယခု မှစ. အစားလေယာဉ်၏ရထားရွေးချယ်ရာတွင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးခံစားချက်မ, သငျသညျမ?
ခရီးဆောင်သေတ္တာ Is ဆုံးရှုံးခဲ့ရ (လုနီးပါး) Unheard Of when comparing Trains Instead of Planes
ဆုံးရှုံးသွားသောအိတ်ပြီးသားအရာ၏အရာတစ်ခုခုသည်, အနည်းဆုံးအားတဲ့အခါလာ ခရီးဝေးလေယာဉ်ခရီး. ကြောင်းဆန့်ကျင်, တစ်ဦးတည်းခရီးသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိတ်စိုးရိမ်သောသူဖြစ်ကြ၏အဖြစ်ရထားဘူတာနှင့်ရထားခရီးသည်အိတ်ဆုံးရှုံးကြဘူး. သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သလောက်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်သောလေယာဉ်နဲ့မတူပဲ အိတ်န့်အသတ်.
သငျသညျလေဆိပ်လုံခြုံရေးများ၏ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ Skip နိုင်သလား
ဘယ်အချိန်မှာကလုံခြုံရေးမှကြွလာ, အစားလေယာဉ်၏ရထားရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ဦးယုတ္တိရွေးချယ်မှုနဲ့တူပုံရသည်, နှင့်ယခုသင်အဘယ်ကြောင့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါလေဆိပ်လုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံအားဖြင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများတစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ်. သင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုသို့ get မပြုမီသင်နှင့်အတူတရားမဝင်ဘာမှပြုသောအမှုသို့မဟုတ်မဆောင်ခဲ့ကြသိကြသော်လည်းချက်ချင်းချွေးစတင်ရန်. နှင့်, သင့်ရဲ့ခါးပတ်ကိုဖယ်ရှားဖို့မနှစ်မြို့ဖွယ်တောင်းဆိုမှုများကိုမေ့လျော့တော်မပါစေ, သင့်ရဲ့ဖိနပ်နဲ့ whatnot ချွတ်ယူ, ပြီးတော့တစ်ဦး burly သောသူအားဖြင့်နှိမ့်ချ patted ခံရ. ရထားကဒီရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - နှင့်တော်တော်များများဖျံသဘောတူညီချက်.
ရန် Browse Save-A-ရထား သင်အကြိုက်ဆုံး destination သို့ရထားစီးနင်းစာအုပ်ဆိုင်, နှင့်စျေးအသက်သာဆုံးနှုန်းထားမှာ! အားလုံးဘွတ်ကင်အခကြေးငွေအကြောင်းကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလွယ်ကူသော 3-မိနစ်ဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုလက်ခံ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-trip-trains-planes%2F%0A%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#လေယာဉ် #railtravel လေယာဉ်ပျံ planetravel ရထားလမ်း ရထားခရီးသွား